မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်၏ ဇနီး ပြည်သူ့ဘဝ မြှင့်တင်ရေး အမည်ဖြင့် ပါတီထောင်မည် - Yangon Media Group
မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်၏ ဇနီး ပြည်သူ့ဘဝ မြှင့်တင်ရေး အမည်ဖြင့် ပါတီထောင်မည်
မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်၏ ဇနီးဖြစ်သူသည် ပြည်သူ့ဘဝမြှင့်တင်ရေးဟူသည့်အမည်ဖြင့် ပါတီတည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါတီတည်ထောင်ရေးတာဝန်ခံ ဒေါ်အေးအေးသင်းက ပြောသည်။ ပါတီတည်ထောင်မည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စက်တင်ဘာ ၁ဝ ရက်တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ၎င်း၏နေအိမ်၌ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒီလထဲမှာပဲ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံတင်မယ်။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ကျပြီဆိုမှ အစ်မတို့ ကျန်တာဆက်လုပ်မယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ယင်းပါတီကို အခြေခံလူတန်းစား တောင်သူလယ်သမားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်း၏အမျိုးသားဖြစ်သူ မိုက်ကယ်ကျော် မြင့် ထောင်မှထွက်လာပါက ၎င်းက ဦးဆောင်သူဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အေးအေးသင်းက ပြောသည်။ ”ပြည်သူတွေ အခုခံစားနေရ တဲ့ဘဝကို မြှင့်တင်ချင်တဲ့အတွက် တည်ထောင်တာပါ”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ပါတီတည်ထောင်လိုသူ ၁၅ ဦးစာရင်းနှင့်တကွ ယခုလအတွင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျှောက်ထားမည် ဖြစ်ပြီး ယင်း ၁၅ ဦးစာရင်းတွင် ၎င်း၏ဆွေမျိုးများနှင့် လယ်သမား များပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်သင်းသင်းအေးက ပြောသည်။ ယင်းပါတီအနေဖြင့် ၂ဝ၂ဝ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ကျောက်မဲတွင် ရဲအရာရှိ လိုက်ပါလာသည့် ကားပေါ်မှ လက်နက်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ
FIFPro ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အသင်းအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်း ထွက်ပေါ်၊ ဟယ်ရီကိန်း၊ စီရော်နယ်ဒို၊ မက်ဆီ၊ ဆာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဗီယက်နမ်ခရီးစဉ်အတွင်း နိုင် ငံတကာထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ၊ စီးပွားရေး??
စစ်ကိုင်းမြို့သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို လမ်းလျှောက်သင်္ကြန် မလုပ်တော့ဘဲ မြို့ပေါ်ရေကစားမဏ္ဍပ် ၂၇ ခုဖြင?
မေဆင်မောင့်အား အင်္ဂလန်အသင်းတွင်ရွေးချယ်သင့်ကြောင်း ထောက်ခံမှုများရှိနေ
ဗဟိုဘဏ်၏ ငွေလဲနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ဘောင်ပယ်ဖျက်ပြီးနောက် ဒေါ်လာဈေး မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အမြင့်ဆ??